...tti maxxanfame 16:03 30 Hagayya 202116:03 30 Hagayya 2021
Daawwannaafi mariin MM Abiy hogganoota Baha Afrikaa waliin taasisan maal akeeka?
Xumura torban darbe Ministirri Muummee Abiy Ahimad biyyoota Yugaandaafi Ruwaandaa erga daawwatanii booda har’a biyyatti deebi’u Waajjirri Ministeera Muummee Itoophiyaa himeera. Daawwannaan kunneen garuu maal akeeku?
...tti maxxanfame 8:05 25 Hagayya 20218:05 25 Hagayya 2021
Biyyoonni Afriikaa lammiilee Afgaanistaan keessaa baqatan simachaa jiru
Yugaandaan lammiilee Afgaanistaan keessaa baqatan simachuu eegalte, Ruwaandaan ammoo barattoota 250 caalan fudhattee barsiisuuf.
...tti maxxanfame 5:41 21 Hagayya 20215:41 21 Hagayya 2021
Yugaandaatti seerri fiilmii saal-quunnamtii dhorkuuf bahe haqame
Yugaandaatti seerri falmisiisaa farra fiilmii saal-quunnamtii (pornography) dhibbaa garee falmitoota mirga dubartootaan taasifameen haqameera.
...tti maxxanfame 15:00 17 Hagayya 202115:00 17 Hagayya 2021
Yugaandaan baqattoota Afgaan 2,000 simachuufi
Biyyi baha Afrikaa Yugaandaan lammilee Afgaanistaan 2000 erga Taalibaan aangoo qabatee booda baqatanii bahan simachuuf tole jette. Baasii baqattoota kana qubachiisuuf barbaachisu mara kan danda’u Ameerikaadha jedhameera.
...tti maxxanfame 12:45 8 Adooleessa 202112:45 8 Adooleessa 2021
Afaan Swaahiilii Afrikaa tokkoomsuu danda’a jedhan Museveeniin
Pirezdaantiin Yugaandaa Yoweerii Museveenii afaan Suwaahiili aardii Afrikaa tokkoomsuu waan danda'uuf lammileen Afrikaa Afaan kana akka dubbataniif waamicha dhiyeessan.
...tti maxxanfame 13:55 1 Waxabajjii 202113:55 1 Waxabajjii 2021
Ministirri Yugaandaa rasaasaan dhahamuun intalliifi konkolaachisaan ajjeefaman
Hidhattoonni Ministira Geejjibaafi Komaandara duraanii waraanaa Yugaandaa Janaraal Katumbaa Wamalaatti dhukaasuun yoo madeessan intala isaafi konkolaachisaa isaa ammoo ajjeesan.
...tti maxxanfame 6:25 20 Caamsaa 20216:25 20 Caamsaa 2021
Bobbaan jiraattota Kaampaalaa anniisaa elektirikii 'maddisiisuu hin dandeenye'
Mootummaan Yugaandaa wanti haati aangoo kun jedhaniiru jedhamee barruu New Vision irratti maxxanfame sirrii mitii jedheera.
...tti maxxanfame 4:59 20 Caamsaa 20214:59 20 Caamsaa 2021
Shamarree daldaaltuu qurxummii umuriin xiqqoo miseensa paarlaamaa taate
Yugaandaatti shamrreen daldaltuu qurxummiifi umuriin waggaa 23 filannoo baatii Amajjii darbee irratti dorgomuun injifachuun miseensasa paarlaamaa kan umuriin xiqqaa ta'uun galmoofte.
...tti maxxanfame 5:29 9 Ebla 20215:29 9 Ebla 2021
Yugaandaafi Masriin odeeffannoo basaasaa walii qooduuf waliigalan
Yugaandaafi Masiriin wayita muddamni ijaarsa hidha guddicha Abbayyaa Itoophiyaan gaggeessaa jirtuun walqabatee naannicha keessatti dabalaa dhufeetti waliigaltee jijjirraa odeeffannoo basaasaa waliin mallatteessan.
...tti maxxanfame 14:16 18 Guraandhala 202114:16 18 Guraandhala 2021
Humni waraanaa Ugaandaa gaazexessitootaa reebuu isaaf dhiifama gaafate
Humni waraanaa Ugaandaa gaazexessitoota jaha miseensotni isaa reebanii miidhaniif dhiifama gaafatee, waldhaansa isaaniif nan kaffala jedhe.